Igbo, John: Lesson 068 - Nchebe anyi na njikọ nke Nna na Okpara (Jọn 10:22-30) | Waters of Life
Home – Igbo – John - 068 (Our security in the union of Father and Son)
d) Nchebe anyi na njikọ nke Nna na Okpara (Jọn 10:22-30)
22 Ọ bụ Oriri nke nraranye na Jeruselem. 23 Ọ bụ oge oyi, Jizọs nọkwa na-eje ije n'ụlọ nsọ ahụ, na mbara ụzọ Sọlọmọn. 24 Ya mere ndi-Ju b͕ara Ya buruburu, si Ya, Rùe ole mb͕e ka I gēme ka ayi ma jijiji? Ọ buru na Gi onwe-gi bu Kraist, gwa ayi okwu. 25 Jizos zara ha, si, Agwaram unu, ma unu ekweghi. Ọrụ ndị m na-eme n'aha Nna m, ndị a na-agba akaebe banyere m. Ma unu ekweghi, n'ihi na unu esiteghi n'atum, dika Mu onwem gwara unu.
Ememe Nraranye bụ oge maka ọṅụ na obi ụtọ, na-echeta mweghachi nke Ụlọ Nsọ mgbe a dọọrọ ha n'agha na Babilọn na 515 BC. Ọ bụ ndị Macabee wughachiri ya na 165 BC. A na-eme ememme ahụ na mbido December, oge oyi na mmiri ozuzo, ebe ọ bụ na Jeruselem nọ n'ogologo mita 750.N'oge a, Jizọs, ndị ahụ a kpagburu, laghachiri n'ụlọ nsọ ahụ, na-ekwusa ozi ọma na mbara igwe Solomon ebe ndị na-eleta ụlọ nsọ ga-ege ya ntị. Ekwughachiri owuwu ụzọ ọwụwa anyanwụ a na Ọrụ 3:11 na 5:12.
N'oge a, ndị Juu kwadebere ịwakpo Jizọs. Ha choro ka o kwue n'ihu ọha ma ọ bụ Mesaịa ahụ a na-atụ anya ma ọ bụ na ọ bụghị. Ihe o kwusara banyere onwe ya dị elu karịa na ndị mmadụ na-atụ anya n'aka Mesaịa ha. Ihe ndị ahụ ha na-achọ bụ ihe ịsụ ngọngọ. Mana ufodu kwenyere na Jisos nwere ike ibu ezi Kraist, n'ihi na onye ya, ikike na oru ya di oke nma.
N'ihi ya, ha gbalịrị ịmanye Kraist ka ọ kpọọ oku na-akpali akpali maka ijegharị mba ndị Kraịst. E kwuwerị, oriri ahụ bụ ihe ncheta nke nsogbu ndị Maccabean. Ha nwere olile anya na ya ga-acho ka ikike ya buru eze nke ala, na-akpọ ndị ya ka ha gaa agha. Ha dị njikere ịgbaso ya ka ha lụọ agha ma chụpụ ihere nke ịchịisi eze n'aka ha. Jizọs nwere atụmatụ ndị ọzọ: ịdị umeala n'obi, ịhụnanya na mgbanwe nke uche. Ọ gwaghị ndị Juu na ya bụ Mezaịa ahụ, ebe o mere ya nye nwanyị Sameria ahụ. O kwupwara nwoke ahụ kpuru ìsì banyere ebube Chineke. Ndị Juu chọrọ Mesaịa bụ onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị na onye na-enweghị isi; Jizọs bụ onye mgbapụta ime mmụọ, ma nwee ọmịiko. Ndị ahụ na-atụ anya ikike, nnwere onwe na nsọpụrụ. Jisos biara na-aghota onwe onye, ​​ezi uche na imeghari ohuru. O kwuputara ịdị ukwuu ya, ma ha aghọtaghị nke a, n'ihi na ha chọrọ ihe ọ bụghị. Echeghi obi, okwukwe adighi abia n'obi ha. Ha emegheghi obi ha nye Mo Nso nke Jizos. Emere ihe ebube ya n'aha nke Nna ya nke kwadoro ya ma mee ka o merie ya.
Ndị Juu nọ na-anụ ọkụ n'obi ịnụ banyere njikọ dị n'etiti Ọkpara ahụ na Nna ya dị ka ntọala maka ọnọdụ ha. Ha na-achọ ime ihe ike, ego na njikarị, ruo taa.
27 Aturu m na-anụ olu m, amakwaara m ha, ha na-esokwa m. 28 Mu onwem nēnye ha ndu ebighi-ebi. Ha agaghi-ala n'iyì rue mb͕e ebighi-ebi, ọ dighi kwa onye ọ bula gānara ha n'akam.
Jizọs bụ Nwa Atụrụ Chineke dị umeala n'obi; ọ na-akpọ ndị na-eso ụzọ ya atụrụ na ụmụ atụrụ, ndị na-etinye ọdịdị ya. Ihe mbu ha bu na ha gege nti, n'ihi na Mo Nso meghere uche ha na obi ha, ka olu Jisos na uche ya we banye n'ime omimi ha, we mee ha ka ha buru ndi ohuru ohuru. Anya nke uche bụ mmalite nke ịbụ onye na-eso ụzọ.
Kraist maara ndi nile na ege nti okwu a; ọ hụrụ ha n'anya, hụ ihe nzuzo ha, ma mara oyiyi nke ọ ga-akpụzi ha. Ezigbo Ndị Kraịst anaghị ada mbà n'obi. A maara ha na aha ha edere n'eluigwe. Onye ọ bụla bụ ọrụ ebube, ihe ọhụrụ Chineke.
Jizọs dị ka Onye Ọzụzụ Atụrụ Ọma; a na-eji atụrụ ya eme ihe n'olu ya, ma na-eso ya na ọṅụ nke ịkwado onye ndu ya. Ha achọghị ihe ọ bụla ma uche ha Ọzụzụ Atụrụ. Echiche nile nke obi ojoo enweghi obi ha; ha bụ ụmụ atụrụ dị nwayọọ.
Nke a gbanwere n'ime ha n'ihi ọrụ Kraịst n'ime ha. O nyere ha ịhụnanya Chineke, na ike imeri ọnwụ na mmehie. Ha agaghi anwu kama ha no ndu ebighebi, n'ihi na ha nwere ndu ya, onyinye nke ndu ebighebi. Ha nwere onwe ha pụọ n'ikpe na ọnwụ, site na ọnwụ ebighi ebi; ndị ezi omume site na ọbara Kraịst.
Ọ dịghị atụrụ ọ bụla a zụtara site n'ọbara Kraịst ga-ala n'iyi. Ọ hapụrụ ebube eluigwe ịzọpụta ụmụ mmadụ, ma taa ahụhụ inye ha ndụ. O kpebisiri ike idebe ha na ihe niile. Ị nwere obi ike na aka Onyenwe gị? Ị họọrọ ike nke Kraịst na ike ya? Ma obu na i bi n'ime uwa nke nmehie a bu onye na-awaghari ma obu na i nwere onwe gi site na iwere umu Chineke n'ime Kraist juputara na Mo Nso. Nchebe nke Onyenwe anyị karịrị ọrụ anyị, n'ihi na ọ na-agafe karịa ihe ọmụma anyị, anyị na-eguzo n'akụkụ Victor.
29 Nnam, Onye nyeworom ha, kariri ihe nile. Ọ dighi onye ọ bula puru inapu ha n'aka Nnam. 30 Mụ na Nna m bụ otu."
Ụfọdụ ndị kwere ekwe ga-enwe obi abụọ n'echiche ahụ na nwa okorobịa ahụ bụ Jizọs ga-eme ka ha ghara ịnwụ, Setan na ọnụma Chineke. Nke a enweghị nghọta. Ọ bụ ya mere Jizos ji mee ka ndị na-eso ụzọ ya mata Nna ya na ike Ya nile. Ọ bụ onye họọrọ onye ọbụla na-eso Jizọs. Ọ dịghị onye na-eso Jizọs ma ọ bụ uche Chineke na nhọrọ Ya.
Chineke bụ Nna na-ahụ maka ndị na-arapara n'ahụ Ọkpara Ya. Nna ahụ bụ Onye Ukwu, onye nwere ike ime ihe niile. Jizọs emeghị ihe masịrị onwe ya ma rubere Nna ya isi.
Maka otutu ihe ndi mmadu ghotara ya, odidi nke chi di nime ya. Ụfọdụ na-ekwu dị ka à ga-asị na Kraịst dị ala karịa Nna ya. Ma iwu nke Mmụọ Nsọ na-agwa anyị na onye na-ebuli onwe ya elu ga-eweda ya ala, onye na-eweda onwe ya ala ga-ebuli elu. Ebe ọ bụ na Jizọs nyere Nna ya otuto niile, O nwere ikike ikwu, "Mụ na Nna m bụ Otu." Ngosipụta a mere ka a ghara ịjụ ndị na-asị na anyị na-esonyere onye ọzọ na Chineke. Anyị adịghị efe chi atọ, anyị na-efe otu Chineke. Ndị na-agọnahụ ịdị n'otu zuru oke nke Kraịst na Nna ya dị mpako, n'amaghị na ụzọ ịdị ukwuu si malite ịdị umeala n'obi.
EKPERE: Onyenwe anyị Jizọs, ị bụ ezigbo Onye Ọzụzụ Atụrụ. Ị tụbara ndụ gị maka atụrụ. I nye anyi ndu, ya mere anyi agaghi anwu. Anyị na-ekele gị; ị na-egbochi anyị ịnwụ, Setan, mmehie na ọnụma Chineke. Ọ dịghị onye ga-anapụ anyị n'aka gị. Na-akụziri anyị ịdị umeala n'obi gị, ka anyị wee mara Nna n'ime gị, na ịgọnahụ onwe anyị, ka e wee hụ ike gị n'adịghị ike anyị.
Olee otú Kraịst si edu ìgwè atụrụ ya?